Agaasimaha Fulinta, Latoya waxay qaabeeysaa higsiga iyo shaqada Boston School Finder ayada diirada saaraaysa kordhinta helitaanka xogta waxbarashada iyo fursadaha waxbarasho ee waalidiinta, gaar ahaan qoysaska aan cadaanka ahayn. Waxay abuurtaa ayna siiwadaa wada shaqayn xeeladaysan oo lalayeesho ururada iskaashiga la leh Boston School Finder ayna kujiraan degmooyinka, dugsiyada, maalgaliyaasha, xeer sameeyaasha ururada bulshada iyo dadka saamaynta ku leh, waalidiinta, iyo lataliyaasha. Iyada oo kaashaneysa shaqadeeda Boston School Finder, Latoya waxay u dooddaa siyaasadaha iyo barnaamijyada waxbarashada kuwaasoo sida ugu wanaagsan ugu adeegaya qoysaska Boston.
Rana Kannan, Agaasimaha Maaraynta
Emily Montiero, Agaasimaha Barnaamijka
Ayadoo ah Agaasimaha Barnaamijka, Emily waxay aqoonsataa oo dhistaa xiriirro muhiim ah ururada iskaashatada bulshada. Waxay hiigsaneysaa inay ka caawiso ururada inay adeegsadaan qalabka iyo ilaha Boston School Finder, iyo sidoo kale inay ka caawiyaan sidii loo dhisi lahaa kartidooda.
19 sano ee la soo dhaafay, Emily waxay ka shaqeysay dugsiyada dadweynaha Boston charter ka ah ayadoo bixin jirtay hagitaan iyo taageero lasiiyo ardayda iyo qoysaskooda. Emily waxay soo ahayd macalin dhanka kobcinta, tababbaraha shaqaalaha, maamulaha kooxaha taageerada ardayda, iyo hogaamiyaha dugsi.
Emily waxay la nooshahay qoyskeeda oo dagan Randolph, waxayna leedahay gabadh dhigata dugsiga Montessori.